चर्चित हाँस्यकलाकार, गायिका तथा सुन्दरी मोडल सन्ध्या बुढा ‘काउली बुढी’ प्रेममा छिन ? हेर्नुहोस् विबाह र आफ्ना ह्याण्डसम प्रेमीबारे यसो भन्छिन् – Gazabkonews
चर्चित हाँस्यकलाकार, गायिका तथा सुन्दरी मोडल सन्ध्या बुढा ‘काउली बुढी’ प्रेममा छिन ? हेर्नुहोस् विबाह र आफ्ना ह्याण्डसम प्रेमीबारे यसो भन्छिन्
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा गायिका सन्ध्या बुढा ‘काउली बुढी’ नामले चर्चित छिन । ‘काउली बुढी’ नामले चर्चा पाएकी उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै क्रियाशील हुन्छिन् । हालै मात्रै उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा केही नयाँ र तस्बिर अपलोड गरेकी छन् । इन्स्टाग्राममा उनको फलोअर ११ हजार २ सय बढी छन्
चर्चित लोक तथादोहोरी गायिका सन्ध्याबुढा कोलोकप्रियता लोभलाग्दो छउनी गायिका मात्र हैन कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन् । वास्तविक नाम भन्दा उपनामले धेरै चिनिने कलाकार मध्य सन्ध्याबुढाको नामपनि जोडीन्छ ।
उनी नेपाल आइडल सिजन २ मा सहभागी भएपछि चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन् । चर्चित गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलको सिजन २ मा टप ट्वेन्टी अर्थात् पियानो राउन्डका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका क्रममा उनी थिएटर राउन्डबाटै बाहिरिएकी थिइन् । नेपाल आइडलमा आएपछि उनी सेलिब्रेटी भइन् । सन्ध्याले निरन्तर मेहनत गरिरहने हो भने भने चर्चा कमाउन धेरै समय नलाग्ने पनि प्रामणित गरेकी छन्
सुर्खेतकी २४ वर्षीया ‘काउली बुढी’ उर्फ सन्ध्या चर्चित लोक गायिका पनि हुन् । उनको आवाजमा २४ भन्दा बढी लोकदोहोरी गीत छन् । केही गीतमा आफैँले मोडलिङ समेत गरेकी छिन्
‘बर्खा लायो असिनाको झरी’, ‘कि भुल्यौ र’ , ‘सानु तिमी मुटुको धड्कन हौ’ लगायतका दर्जनौँ लोकदोहरी गीतमा आवाज दिएकी सन्ध्या कलाकार कृष्ण कँडेलले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’ बाट कलाकारितामा प्रवेश गरेकी थिइन्
कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’ मा गीत गाउँदै आफ्नो गला र कलालाई निखारेकी सन्ध्या ‘धमलाको हमला’, ‘जोगिन्दर की पान पसल’ जस्ता टिभी कार्यक्रममा समेत कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा देखा परिसकेकी छिन्। उनलाई प्रेमबारे सोधिएको प्रश्नमा आँफु प्रेममा रहेको स्विकारे पनि समय आएपछि मात्रै आफनो दिलको राजालाई दर्शममाझ चिनाउने बताएकी छिन् । उनले आँफु केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
सुन्दरी कवितासँग रोमान्समा मक्ख दीलिप, हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
प्रेमकथामा आधारित नयाँ लोकदोहारी गीत ‘के छ ज्यानलाई’ को चर्चा, दीलिप र कविताको गज्जब अभिनय, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं – प्रेमकथामा आधारित नयाँ लाेकदाेहारी गीत ‘के छ ज्यानलाई’लाई सार्वजनिक भएको छ।
हेमन्त कान्छा र निता पुन मगरको स्वरमा रहेको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनेता दीलिप राइमाझी र कविता नेपालीको अभिनय रहेको छ। म्युजिक भिडियोमा दीलिप र कविताको जोडी रोमान्टिक देखिएको छ।
यस गीतलाई रमेश विजीले लेखेका हुन। हेमन्तकै संगीत रहेको गीतको कोरियोग्राफी कुमन नेपालीले गरेका हुन्।
यसको छायांकन करन चैसिर गरेका हुन् भने मनोज कार्कीले सम्पादन गरेका छन्।